BBC Burmese - ဆွေးနွေးဖလှယ် - ကလေးတွေရဲ့ အခွင့်အရေး ဘယ်လိုကာကွယ်ပေးမလဲ
နောက်ဆုံး ရေးသားချိန် 25 ဇန်နဝါရီလ 2012 - 15:48 GMT
ကလေးတွေရဲ့ အခွင့်အရေး ဘယ်လိုကာကွယ်ပေးမလဲ
ကလေးတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ဘယ်လောက် ဆုံးရှုံးနေလဲ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကလေးတွေရဲ့ အခွင့်အရေး တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ပေးမှု အားနည်းတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ ကလေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မီတီဝင်တွေက ပြော ပါတယ်
ဒီတော့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှာ ပညာသင်ခွင့် ဆုံးရှုံးနေတဲ့ကလေးတွေ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့်မခံရတဲ့ ကလေးတွေ
မဖွယ်မရာပြုမူခံနေရတဲ့ ကလေးတွေ ဘယ်လောက်များပါသလဲ
သူတို့လေးတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို ဘယ်လိုရအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲ
သောတရှင်တွေနဲ့အတူ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးဌာန မြန်မာနိုင်ငံ HREB ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်မျိုးမင်း နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများအဖွဲ့ HRDP က ဦးမောင်မောင်လေးတို့ပါဝင်ဆွေးနွေးထားတာကို နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
နားထောင်ပြီး တခုခု ပြောချင်ရင် ဘီဘီစီကို ဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ burmese@bbc.co.uk ကိုအီမေးလ်နဲ့ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
တယ်လီဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင် ၀၀ ၄၄ ၂၀၇ ၅၅၇ ၁၇၆၄ ကိုအမြန်ဆက်သွယ်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
အောက်ပါကွက်လပ်ကို ဖြည့်ပြီးလဲ ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
ကလေးသူငယ်များသည် တိုင်းပြည်၏အနာဂတ်ဖြစ်သည်ကို လူတိုင်း အသိအမှတ်ပြု ခံယူကြရန်လိုအပ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးများကို နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းက လေးစားတန်ဖိုးထား အရေးတယူရှိကြရန်အရေးကြီးပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည်ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်ကိုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးထားသည်နှင့် အညီ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ကလေးသူငယ်ဥပဒေကို န.၀.တ ဥပဒေအမှတ် - ၉/၉၃ အဖြစ်ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါဥပဒေအရ ၁၉၉၃ ခုနှစ် ကလေးသူငယ်ဥပဒေကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မြို့နယ်တိုင်းတွင် ကလေးသူငယ်တို့၏အခွင့်အရေးများကို အမှန်ကယ်ကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်မည့်၊ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများကို အမှန်တကယ် လက်ခံယုံကြည်စွာလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မည့် ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပေးနိုင်ရန်မှာ ပထမလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။
ဒုတိယလိုအပ်ချက်မှာ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများနှင့် စပ်လျဉ်းသည်တို့ကို ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအသီးသီးတွင် အသိပညာပေးဟောပြော ပွဲများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ လက်ကမ်းကြော်ငြာများ စသည်အားဖြင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသိပညာပေးနိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
တတိယလိုအပ်ချက်မှာ ကလေးသူငယ်များအခွင့်အရေးကိုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ကြမည့် NGO အဖွဲ့အစည်းများကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှင် သန်လှုပ်ရှားခွင့်ပေးနိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
အထူးသဖြင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးကို ပြည်နယ်အစိုးရ၊ တိုင်းအစိုးရများအနေဖြင့် အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ကြမည်ဆိုပါက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကလေးအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုများ လျောနည်းကျဆင်းလာမည်ဖြစ်ပါသည်။
အစိုးရရဲ. ဥပဒေကြောင်းအရ အကာအကွယ်ပေးမှု ဆိုတဲ အခန်းကဏ္ဍက အရေးကြီးသလို တဖက်မှာလည်း မိဘ (သို့မဟုတ်) အုပ်ထိန်းသူတွေရဲ. အခန်းကဏ္ဍကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
ဥပဒေကြောင်းအရ အကွာအကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ နေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကလေးသူငယ် ဥပဒေဆိုပြီး ဥပဒေတရပ်ကို ၁၉၉၃ခုနှစ်မှာ ပြဌာန်းထားခဲ့ပါတယ်။ ဥပဒေပြဌာန်းထားပေမဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ဆိုတာက အားနည်းနေတဲ့ အတွက် တကယ်တန်း ကလေးတွေရဲ. အခွင့်အရေးကို ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ် ပေးနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။
ဥပမာ ၁၉၉၃ ခုနှစ် ကလေးသူငယ် ဥပဒေ အခန်း (၁၇) အရ ကလေးတွေကို အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားစေတဲ့ အလုပ်လုပ်ခိုင်းတာမျိုး၊ အရက်ဆိုင်ကို
ကလေးခေါ်သွားတာမျိုး၊ အရက်ရောင်းတဲ့ နေရာ ကလေးတွေ ခိုင်းတာမျိုး၊ လောင်းကစား ကိစ္စတွေမှာ ကလေးတွေကို ပါတ်သက်စေတာမျိုး၊ လိင်လုပ်သားအဖြစ် ခိုင်းစေတာမျိုး စသဖြင့် ကျူးလွန်ရင် ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်းခံရမယ်လို. ပြဌာန်းထားပေမဲ့ တကယ်တန်းကျတော့ ကျူးလွန်တဲ့သူတွေ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတာမျိုး မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။
ဒါကြောင့် ဥပဒေ ပြဌာန်းထားရုံနဲ့ မပြီးပဲ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုက အရေးကြီးပါတယ်။
အရှင်ပညာစာရ မွေးစားထားသော ကလေးများကို အပြစ်မရှိဘဲ ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့မှ ဗမာပြည်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းသည် ကလေးအခွင့်အရေး ဘယ်လောက်ချိုးဖေါက်ခံရပါလည်း။
ဥပဒေအရဘယ်လောက်အပြစ်ရှိပါသလည်း။ ကလေးအခွင့်အရေးလုပ်ဆောင်နေသူများကိုမေးပါရစေ။ ရခိုင့်အမျိုးသားရေး နိုင်နိုင်